Junior Win – မမေ့နိုင်စရာများ | MoeMaKa Burmese News & Media
၁၀နာရီ ၃၇မိနှစ်။ နေရာကတော့ အလုပ်အမူဆောင်ကောင်စီ ပြည်နယ် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး လုပ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာ … ဥက္ကဌအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်မူအောက်က ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာ စိတ်ကူးနဲ့တောင် ပုံဖော်လို့မရတဲ့ အလွန်ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်မှုရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားရသည်။ လူထုယုံကြည်ရသည့် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ မန်းဘခိုင်၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိူ၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားစပ်စံထွန်း၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးဘ၀င်း၊ ဦးအုန်းမောင်၊
(The Unforgettable အမည်နဲ့ ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသောThe Unforgettables ဟူသောဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ကာ စာဖတ်သူများအတွက် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။)
(မိုးမခသတင်းက ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ သူ့ဘလောက်က ယူတယ်)
Photo Credit – http://www.layoutsparks.com/1/37812/red-rain-clouds-fall.html
One Response to Junior Win – မမေ့နိုင်စရာများ
witmone on July 21, 2012 at 1:05 pm
THANK YOU .. Good Memory
My tear drop again .. we have many painfull life experience and country leaders should united. I hope, bad leaders will phase out slowly. …. The Lady movie is for Artistic Fiction – to profit from the world viewers. (Not for Burmese – it really promote our country by optimistic view). Movie director knew the truth but purposely created “killing action” to make more money. As long as Burmese can not reveal by itself, the truth are hidden.